जापानमा जुलाई! ग्रीष्मकाल बयाना मा सुरु हुन्छ! तातोबाट सावधान! - Best of Japan
Panoramic रंगीन फूल क्षेत्र र Shisisai-no-oka, Biei, Hokkaido, जापान मा = शटरस्टकमा नीलो आकाश
जुलाई को महीनामा जापान मा कहीं पनि मौसम तातो छ! जुलाई जुलाई पछि, दिनको अवधिमा अधिकतम साम्राज्य प्राय: 35 XNUMX डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी जान्छ। यदि तपाईं जुलाईमा जापानमा यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया होशियार रहनुहोस् बाहिर जाँदा आफूलाई होसियार नपार्नुहोस् किनभने तपाईंलाई तातो स्ट्रोकको खतरा हुन सक्छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जुलाईमा जापानको भ्रमणको लागि उपयोगी जानकारी दिनेछु।
जुलाई मा टोकियो, ओसाका, होक्काइडो को जानकारी
कृपया आउटडोर तातो र इनडोर चिसोका बारे सावधान हुनुहोस्
कृपया टाइफुन आक्रमणबाट सावधान हुनुहोस्
होक्काइडो र होन्शुको डाँडाहरू सिफारिस गरियो
यदि तपाईं जुलाईमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका स्लाइडरमा थप जानकारीको लागि छवि क्लिक गर्नुहोस्।
जापान मा, जुलाई को पहिलो आधा अपेक्षाकृत वर्षा छ। जुनदेखि वर्षायाम प्रायः निम्न महिनामा जारी रहन्छ। तर जुलाईको पछिल्लो मौसममा सुधार हुनेछ र दिनमा यो सफा र घाम लाग्ने छ। दिनको अधिकतम तापक्रम हरेक दिन degrees० डिग्री भन्दा बढि हुन्छ र रातमा पनि यो २ 30 भन्दा तल झर्दैन। अर्कोतर्फ, वातानुकूलित भवनहरूमा वायु धेरै चिसो हुन्छ। यस कारणले, केही मानिसहरूलाई कठोर तापमान परिवर्तनको कारण अस्वस्थ महसुस हुन सक्छ। यदि तपाईं सजिलै चिसो हुनुभयो भने, म सुझाव दिन्छु कि तपाईं कार्डिगन वा यस्तै कपडाका सामानहरू घर भित्र लगाउनका लागि ल्याउनुहोस् ताकि यो तपाईंलाई नहोस्।
दिनको समयमा कृपया बाहिरबाट तातो स्ट्रोक रोक्नको लागि पानी पिउनुहोस्। यदि तपाई धेरै दर्शनीय स्थलहरूको भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ भने पनि, बढि पैदल नहुन सावधान हुनुहोस्।
म विश्वास गर्न सक्दिन टोक्योमा ओलम्पिक खेलको यस समयमा हुनेछ। मलाई चिन्ता छ कि २०२० मा विदेशबाट आएका पर्यटक तातो स्ट्रोकबाट तल झर्नेछन्।
जापानको क्युकु, जापानको कोकुरामा सेतो महल टावर र सुन्दर केन्द्रीय पार्कको हवाई दृश्यaभारी आँधीबेहरी = शटरस्टकको समयमा
हरेक वर्ष जुलाई देखि सेप्टेम्बर सम्म, टाइफुन जापानमा धेरै चोटि हिड्नेछ। जब आंधी आउँदछ, प्रभावित क्षेत्रहरूमा रेलहरू चल्न बन्द हुनेछन् र विमानहरू उडान गर्न सक्दैनन्। स्टेशनहरू र एयरपोर्टहरू घाटामा परेका व्यक्तिहरूले भरिनेछन्। होटलहरू प्रायः पूर्ण रूपमा बुक हुन्छन्।
म तपाईंलाई अनुरोध गर्दछ कि मौसम मौसम पूर्वानुमान प्राय: जापानमा यस समयमा आउनु भन्दा अघि जाँच्नुहोस्। आइपुगे पछि पनि तपाईले सकेसम्म भर्खरको मौसम पूर्वानुमानको साथ अपडेट राख्नु पर्छ।
यदि तपाईं जापानमा रहँदा टाइफून अनुभव गर्नुहुन्छ भने, कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि आरक्षित प्लेनहरू र ट्रेनहरू निर्धारित समयमा चलेका छन्। यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईंको ट्रेन वा प्लेन रद्द हुनेछ म तपाईंलाई तपाईंको यात्रा कार्यक्रम पछि समायोजन गर्न समायोजन गर्न सिफारिश गर्दछु।
जुलाई र अगस्त बीच, जापानको मौसम यति तातो छ कि धेरै जापानी मानिसहरू होक्काइडो र होन्शु उच्च पहाडहरूमा छुट्टी गर्दछन्। यी क्षेत्रहरूमा, यो तुलनात्मक रूपमा सुन्दर र रमाईलो समय पाउन सजिलो छ। सुन्दर फूलहरू फूलेका छन् र त्यहाँ धेरै प्राकृतिक क्षेत्रहरू छन्, त्यसैले म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि यी चिसो क्षेत्रहरूमा पनि जानुहोस्।
हग्काइडो र नागानो प्रान्तको करुइजावा, अन्य स्थानहरू मध्ये, पर्यटकहरूको लागि लोकप्रिय छन्। त्यसो भए, यदि तपाइँ जापान जाने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, कृपया जतिसक्दो चाँडो आफ्नो आवश्यक रिजर्भेसन गर्नुहोस्।
यदि तपाईं एक विशेष लोकप्रिय दर्शनीय स्थल जानुभयो भने, क्षेत्र सामान्यतया दैनिक ट्राफिक भीड हुन्छ। यस कारणका लागि, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं सकेसम्म बढी कारहरूमा ट्राफिकबाट बच्न ट्रेनहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
करुइजावामा जहाँ धेरै पर्यटक टोकियोबाट आउँछन्, कारबाट एक रेल स्टेशनको दूरी सार्न यसले एक घण्टा भन्दा बढी लिन सक्दछ। यदि तपाई वास्तवमै ड्राइभ गर्न चाहानुहुन्छ भने उत्तम हुनु राम्रो हुन्छ बिहान सकेसम्म चाँडो जानु पर्छ।